Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Dalka Uganda -
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa xalay kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda.
Kulanka Madaxweynaha Soomaaliya uu la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa socday mudo saacado ah, waxaana jaaliyadda ay Madaxweynaha u soo gudbiyeen cabashooyin ay qabeen.
Mudane Farmaajo oo khudbad ka jeediyay kulankaasi ayaa balan qaaday in la soo celinayo sharafkii Soomaaliyeed, waqtiga ay doonto ha qaadatee, isaga oo sidoo kale sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay taageeraan Dowladda.
Wuxuu sheegay Dhalinyarada Shabaab ku jirta in ay heystaan fikir qaldan, ayna Dowladda u fidisay cafis, hadana ay bilaabeen in ay isa soo dhiibaan, taasina ay muujineyso horay u socosho.
Sidoo kale Farmaajo ayaa sheegay Beesha Caalamka in ay ka go’an tahay in ay gacansiiso Soomaaliya, wuxuuna jaaliyadda ku dhiirageliyay in ay ka qeyb qaataan dib u dhiska dalka, si loo gaaro guulo hormar leh.
Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maalin ka hor ka ambabaxay Garoonka magaalada Muqdisho, iyaga oo dalkaasi Uganda uga qeyb galaya shir looga hadlayo arrimaha Qaxootiga, kaasi oo laba maalmood soconaya.
Related Items:Featured, Jubbaland, Mogadishu, President of Somalia, Puntland, Somali community, Somalia
Magaalada Muqdisho oo laga dareemayo Diyaar garowgii maalinta Ciidda, Daawo sawiradda